Su’aalaha badanaa la weeydiiyo – Iskaa U Noqoshada
Su’aalaha badanaa la weeydiiyo
Waa maxay iskaa u noqoshada?
Nidaamka iskaa u noqshadu waa arrinka ah, in qofka ajnabiga ah ee codsaday badbaadada caalamiga ah uu si iskiis ah dib ugu noqdo dalkiisii hooyo, ama dalkii kale ee uu ku haysto sharciga degganaanshaha (ciqaamadda). Qofku waxaa uu dib u noqon karaa iyadoo wali hawlihii codsiga magangalyoddoonistiisu ay dhexda u marayaan ama kaddibba. Iskaa u noqoshada waxaa ugu horrayn inta badan loo soo jeediyaa dadka aan la siinin sharciga degganaanshaha, ama dadka aan soo buuxin shuruudihii ay sharciga degganaanshaha uga heli lahaayeen dalka ay qaxootinnimada isaga dhiibeen.
Nidaamka iskaa u noqoshada ah waxaa ka mas’uul ah Waaxda socdaalka (Migri) iyo xerada qaxootiga ee uu qofka laabanaaya ka diiwangashan yahay. Hay’adda ugu muhiimsan ee Waaxda socdaalka kala shaqaysa arrinkaan iskaa u noqoshada waa ururka caalamiga ah ee ka tirsan qaramada midoobay, ee qaabilsan arrimaha dadka muhaajiriinta ah IOM (International Organization for Migration). Ururuka IOM waxaa uu qofka dib u noqonaaya u diyaariyaa safarka, wuxuu siiyaa talooyin, waxaana uu wax ka qabtaa baahiyaha kooxaha khaaska ah. Waaxda socdaalku waxaa ay waddamada dib loogu laabanaayo ku leedahay ururro adeeg bixiyayaal ah, kuwaasoo ah ururro caalami ah ama kuwo waddamada gudahooda ka dhisan, waxaana Waaxda socdaalku iyadoo kuwaas kaashanaysa ay hubsanaysaa in dib u noqoshadii ay si wanaagsan u hirgashay iyo inkale.
Nidaamka iskaa u noqoshada ah wuxuu ku salaysan yahay sharciyada loogu talaggalay Ajaanibta iyo sharciyada xeryaha qaxootiga, waxaana intaas dheer oo xadadka ugu muhiimsan ee tirada lacagta taageerada ah lagu qeexay nidaamka wasaaradda arrimaha gudaha.
Maxay tahay taageerada dib u nooqoshada?
Waa taageero loogu talaggalay qofka aan hantida haysan ee dib u noqonaaya, Taasoo isaga ka caawinaysa sidii uu ula qabsan lahaa dalkiisa hooyo. Taageeradaas loo fidinaayo qofka dib u noqonaaya waxaa ay tahay, kharshka diyaaraddii uu u raaci lahaa dalkiisa hooyo, taageerada lagammamaarmaanka ah ee kharashyada ka dhalanaya dib u noqoshada kadib, iyo sidoo kale qaybta ugu weyn ee taageeradaas oo ah sidii looga taageeri lahaa dib ulaqabsashada labaad, tusaale ahaan sida shirkad asaasid oo kale.
Maxay ka kooban tahay taageerada dib u noqoshadu?
Taageeradu waxaa ay ka kaooban tahay kharaska safarka, qabanqaabinta safarka, caawimaadda la siiyo qofka dib u noqonaaya ee loogu talagay ka taageerista dib ulaqabsashada labaad ee dalkiisa, taasoo noqon karta taageero ah lacag kaash ama caddaan ah iyo caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn.
Maxay ka kooban tahay taageerada dib u noqoshada ee caawimaadda lacag ahaaneed ah?
Caawimaadda waxaa lagu bixin karaa taageero kaash ah, ama caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn.
Taageerada kaashka ah waxaa loola jeedaa lacag kaash ama caddan ahaan loo bixinaayo, taasoo 200 yuuro oo ka mid ah qofka lagu siinaayo dalkan Finland gudihiisa, inta soo hadhayna waxaa lagu siinayaa dalka uu ku noqonaayo.
Caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn waxaa loola jeedaa, adeegyo ah alaabo ama caawimaad kale oo ah waxtar aan lacagta ahayn, tusaale ahaan shirkad asaasid ama helitaanka goobtii ama alaabtii loo baahnaa ee shirkaddaas lagu asaasi lahaa, guri ijaarashada, bixinta kharash sannadeedka waxbarashada iskuulka ama machadka, ama soo iibsashada adeegyada la xiriira daryeelka caafimaadka. Haddii aad doonayso caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn, waa in aad ka fekerto waxyaabaha suurtaggalka kuu ah adiga in ay kaaga qabsoomaan dalkaaga hooyo. Waxaad tusaale ahaan ka fekertaa arrimaha so socda:
– Xaalad noocee ah ayaad ku noqonaysaa?
– Maxaad hore uga soo qabatay dalkaagii hooyo?
– Maxaad u baahan tahay in aad samayso marka aad ku noqoto dalkaaga hooyo kaddib?
– Sidee ugu wanaagsan ayaad uga faa’iidaysan kartaa taageerada adiga lagu siiyay?
Xerada qaxootiga ayaa lagaa siin doonaa talooyinka ku saabsan qaabka ugu suurtaggalsan ee aad taageeradaas u isticmaali kartid, iyo falalka waxqabad ee la xiriira qabanqaabinta caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn. Waxaana caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn laguugu diyaarinayaa dalkaaga aad ku noqonayso, iyadoo laguu soo marinaayo hay’ad lagu kalsoon yahay oo adeeg bixiye ah, taasoo aad wadashaqayn la yeelan doonto.
Cadad intee le’eg oo caawimaadda lacageed ah ayaan helayaa?
Cadadka caawimaadda lacageed ee la isa siinaayo waa ay kala duwan tahay, waxaana ay ku xiran tahay hadba dalka aad ku noqonayso iyo xaaladda shakhsiyadeed ee qofka. Waxaana cadadka ay caawimaaddaas le’eg tahay lagu qeexay nidaamka wasaaradda arrimaha gudaha ee ku saabsan caawimaadda loogu talaggalay iskaa u noqoshada.
Marka taageerada qofka la siinaayo waxaa tixgalinta gaarka ah la siin doonaa xaaladda shakhsiyadeed ee qofka. Taageerada waxaa loo bixin karaa qaabka ah midda la kordhiyay, ama la dhimay, ama gabi ahaanba bixinteeda waa la joojin karaa.
Goorma ayaan go’aansan karaa in aan rabo taageerada kaashka ah ama caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn?
Nooca taageerada aad doonayso waxaa lagu qoraa codsiga aad ku samaynayso inta aad joogto Finland gudaheeda, arrinkaasna mar danbe dib loogama noqon karo ama lama beddeli karo marka aad noqoto kaddib. Si kastaba nooca taageerada aad doonayso waad beddeli kartaa kahor inta aadan noqon si kasta oo codsiga hore loogu sameeyay, mar haddii aad wali joogto Finland gudaheeda.
Goorma ayaan codsan karaa taageerada dib u noqoshada?
Taageerada dib u noqoshada waxaa la codsan karaa waqti walba oo ka mid ah inta ay socdaan hawlaha codsiga magangalyoddoonka.
Xaggee ayaan ka dalban karaa taageerada dib u noqoshada?
Codsadayaasha magangalyoddoonista waxaa ay taageerada dib u noqoshada ka dalban karaan xerada qaxootiga ee ay macmiil ahaanta uga diiwangashan yihiin.
Adeegyadii aan ka heli jiray xerada qaxootiga waa la iga goostay, waddankana waxaan ku joogaa si aan sharci ahayn, wali ma dalban karaa taageerada dib u noqoshada?
Waad dalban kartaa. Xaaladdaas marka ay sidaa tahayna waxaa codsiga lagu soo hagaajinayaa Waaxda socdaalka (Imaagareeshinka). Waxaadna kala soo xiriiraysa cinwaanka internetka ee ah return@migri.fi.
Ma heli karaa Taageerada dib u noqoshada?
Helitaanka taageerada waxaa shardi u ah, in qofku uu si joogto ah oo aan soo noqosho lahayn uu u noqonaayo iyo in ay jirto baahi taageero. Dib u noqoshada joogtada ah waxaa loola jeedaa, in aad iska kansasho ama baajiso codisga kuu yaalla ee ku saabsan magangalyoddoonista ama kuwa kale ee ku saabsan sharciga degganaanshaha dalka. Sidoo kale waa in aad ku noqotaa dalka aad joogi karto, iee aad doonayso inaad ku noolaato dib u noqoshadaada kaddib. Waxaad heleysaa taageeradaas oo kaliya, marka aanad haysan hanti aad iskaga bixin karto kharashyada ka dhalanayaa safarkaaga dib u noqoshada. Asal ahaanna taageerada dib u noqoshada ma heli kartid dhowr mar, taasoo loola jeedo haddii hore laguu siiyay taageerada dib u noqoshada ee lagaga noqonaayo dalalka Yurub, mar labaad laguma siinaayo taageeradaas.
Finland waxaan ku imid codsiga sharciga degganaanshaha shaqada, waxaana la i siiyay go’aan diidmo ah oo codsigaygii la xiriira. Xaq ma u leeyahay in aan helo taageerada dib u noqoshada?
Taageerada dib u noqoshada waxaa loogu talagalay oo kaliya dadka ka codsaday Finland badbaadada caalamiga ah. Haddii aadan Finland ka codsan badbaadada caalamiga ah, adiga kuma jirtid kooxda dib u noqoshada.
Waxaan Finland ka codsaday badbaadada caalamiga ah, laakiin waxaa la i siiyay go’aan diidmo ah oo ku saabsan codsigaygii, kaddib waxaan helay sharciga degganaanshaha dhanka shaqada lagu bixiyo oo muddo hal sano ah. Haddana waxaan la i siiyay go’aan diidmo ah oo ku saabsan codsiga sharcigii degganaanshaha dhanka shaqada ee sii soconaayay iyo waliba go’aan ah in dib la iigu celiyo dalkaygii hooyo. Wali ma heli karaa taageerada dib u noqoshada?
Haddii aad Finland ku joogtay sharciga degganaanshaha, kaasoo aan mar dambe la cusbooneysiin karin, sida guud ahaaneed xaq uma lihid caawimaadda dib u noqoshada ee ay bixiso Waaxda socdaalka (imaagareeshinka). Si kastaba waxaad suurtaggalnimada taageeradaas weydiin kartaa xafiiska arimaha bulshada (sooshalka) ee degmadaada. Wixii arinkaas ku saabsan ee uu mugdi kaaga jiro ama aan ku kala caddaynna, waxaad caawimaadda arrinkaas weydiin kartaa cinwaanka Waaxda socdaalka ee ah return@migri.fi.
Waxaa dalkaan Finland gudihiisa la ii aqoonsaday qaxootinimo/ sharciga badbaadada caalamaiga ee herka labaad. Ma heli karaa taageerada dib u noqoshada?
Asal ahaan maya, ma heli kartid. Wixii arrinkaan ku saabsan waxaad weydiin kartaa cinwaanka Waaxda socdaalka (imaagareshinka) ee ah return@migri.fi. Haddii la kansalo darajadaadii ahayd badbaadada caalamiga ah ee lagu siiyay, waxaa suurtaggal ah in aad hesho taageerada dib u noqoshada. Sikastaba taageeradaas dib u noqoshada lama helaayo, haddii uu qofku sharciga degganaanshaha ah ku leeyahay Finland gudaheeda. Waxaad suurtaggalnimada taageeradaas weydiin kartaa xafiiska arimaha bulshada (sooshalka) ee degmadaada.
Sidee baan ku heli karaa taageerada dib u noqoshada si aan u isticmaalo?
Haddii aad dooratay oo kaliya qaabka taageerada ee ah kaashka ama lacagta caddaanka ah, waxaa Finland gudaheeda lagugu siinayaa 200 oo yuuro, inta soo hartay ee caawimaaddaas ahna waxaa lagugu siin doonaa dalka aad ku noqonayso, iyadoo laguu soo marinaayo xafiiska hay’adda IOM. Waxaa adiga lagaa doonayaa in marka aad laabato kaddib aad la xiriirto xafiiskaas, islamarkaana aad kala heshiiso waqtiga aad ka soo doonan karto taageeradaas. Halka aad xafiiskaas kala xiriirayso waxaad ka heleysaa hay’adda IOM:ta marka aad Finland ka baxayso.
Haddii aad dooratay qaabka taageerada ee ah caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn, waxaa Finalnd lagugu siinayaa 200 oo yuuro kahor inta aadan laaban. Marka aad timaaddo dalkaaga aad ku noqonaysay, waxaad la xiriirta hay’adda adeeg bixiyaha ah ee cinwaankeeda lagu siiyay, taasoo adiga kuu diyaarinaysa caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn. Waaxana caawimaaddaas waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn laguugu qaban- qaabin doonaa hadba sida uu yahay qorshihii adiga lagula dejiyay. Marka aad dalkaagii ku noqotana waxaa wali caawimaad ahaan laguu siin doonaa lacag gaaraysa 300/500 oo yuuro oo kaash ama caddaan ah, marka ugu horraysa ee aad la kulanto hay’adda adeeg bixiyaha ah.
Anigu ma lihi wax baasaboor ah, waxaanan doonayaa in aan si iskay ah dib ugu noqdo dalkaygii hooyo, maxaan sameeyaa?
Haya’adda IOM ayaa kuu qabanqaabinaysa safarkaaga dib u noqoshada, waxaana ay adiga kaa caawinayaan sidii aad ku heli lahayd dukumintiga lagu safro. Habsocodka hawshaasina waxaa ay ku xiran tahay dalka aad ku noqonayso. Dalal gaar ah qaarkood ayay hawlwadeennada Finland waxay kuugu samayn karaan dukumintiga dib u noqoshada, laakiin guud ahaan safaaradda dalkaaga ayaa doonaysa in ay adiga ku aqoonsato, kahor inta aan laguu samayn baasaboor kummeelgaar ah.
Ma baajin karaa ama ma kansali karaa go’aankayga ku saabsan dib u noqoshada?
Mar alla markaad doonto ayaad baajin kartaa ama kansali kartaa go’aankaaga ku saabsan dib u noqoshada, xitaa gegida dayuuradaha dhexdeeda kahor inta aanay diyaaraddu kicin ayaad ku baajin kartaa ama ku kansali kartaa go’aankaas.
Muxuu yahay farqiga u dhexeeya dib u noqoshada iyo dib u celinta?
Marka aad adigu si iskaa ah dib ugu noqonayso, waxaad haysataa waqti aad bixitaankaaga ugu diyaargarowdo, waxaana dib u noqoshadu ay ku dhacaysaa qaabka ah musaafur caadi ah oo ku safraaya khadka duulimaadyada diyaaradda ee joogtada ah. Waxaad fursad u haysataa in aad qorshaysato dib u noqoshada iyo waqtiga ka dambeeya dib u noqoshadaba, islamarkaana aad la xiriirto qaraabadaada joogta dalkaagii hooyo. Waxaadna heli kartaa taageerada dib u noqoshada ee loogu talaggalay laqabsiga labaad ee dalkaaga.
Dib u celinta waxaa fulinaaya booliska. Hore laguuguma sheegaayo maalinka lagu celinaayo, sidoo kale ma jiro waqti aad isugu diyaarin karto bixitaankaaga. Qaabka dib u celintuna waa mid u dhacaaya hadba sida uu boolisku doorto. Sidoo kale adiga suurtaggal kuuma aha in aad qorshaysato noqoshadaada, mana heleysid taageerada dib u noqoshada ee loogu talagalay laqabsiga labaad ee dalka.
Wixii faafaahin dheeraad ah oo arrinkaas ku saabsan waxaad weydiisaa xeradaada qaxootiga ama cinwaanka Waaxda socdaalka (imaagareeshinka) ee ah: return@migri.fi.